Naongan’ny Ejipsiana i Morsi sy ny Fitondran’ny Mpirahalahy Miozolomana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2013 18:12 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, فارسی, عربي, Italiano, Swahili, Ελληνικά, বাংলা, srpski, Català, македонски, 繁體中文, 简体中文, English
Mohamed Morsi, mpikambana zokiolona ao amin'ny Mpirahalahy Miozolomana, dia tsy filohan'i Ejipta intsony. Tapaka hatreo ny herintaona nitondran'i Morsi, taorian'ny fihetsiketsehana lehibe nanerana an'i Ejipta niantso azy hiala nanomboka tamin'ny 30 Jona.
Ny komandin'ny Tafika Ejipsiana Abdel Fattah Al Sisi no nanambara nandritra ny mivantana minitra vitsivitsy lasa izay fa ny Lehiben'ny Fitsarana Momba ny Lalampanorenana Adly Mansour no ho filoha vonjimaika vaovao ary hantsangana ny governemanta teknokraty nasionaly.
Nilaza ihany koa i Al Sisi fa mihantona ny Lalampanorenana ary hokarakaraina ny fifidianana filohampirenena sy solombavambahoaka.
Maro ny faly tamin'ny fahataperan'ny fiteronteronan'ny Mpirahalahy Miozolomana eny antampon'ny politika Ejipsiana. Nanoratra i Rasha Abdulla:
Al Sisi nanambara ny fiafaran'ny fitondran'i Morsi. Pikantsary tamin'ny CNN Iraisampirenena
Mitondra ny fianjeràn'ny Mpirahalahy Miozolomana i Ejipta. Miodina ny tantara.
Mihoraka ilay Ejipsiana Hossam Eid [ar]:
@EidH: Tsy hisy intsony ny Mpirahalahy [Miozolomana]
Raha eo amin'ny fampiantonana ny lalampanorenana indray dia maneso ilay bilaogera Eman AbdElRahman:
@LastoAdri: Any amin'ny fakon'ny tantara ilay lalampanorenana lehibe indrindra nanerana ny tany
Tatitra avy eny amin'ny kianja Tahrir, ivom-besatry ny revolisiona Ejipsiana ao afovoan-tanànan'i Kairo:
Tsy mbola nahita tahaka izao aho hatrizay niainako: manavatsava ny horakoraky ny vahoaka ny hiran'i Beladi beladi beladi ary mirefodrefotra ny afomanga #Egypt
Etsy ankilan'izany, nahatezitra ny mpanohana an'i Morsi ilay fanambarana. Mitatitra i Mosa'ab Elshamy:
Fahatezerana aoka izany ao amin'ny toerana fanaovan'ny mpirahalahy Miozolomana sit-in. Mandre feombasy lavidavitra any.
Manaraka akaiky ity toe-draharaha ao Ejipta ity ihany koa ny Arabo.
Misioka ilay Yemenita Abdulkader Alguneid:
Roahin'ny tafika Ejipsiana i Morsi amin'izao fotoana izao
Mihoraka ilay Bahrainita Salma:
@salmasays: Mahafinaritra i Ejipta
Manamarika i Mansoor Al-Jamri, avy any Bahrain ihany koa:
@MANSOOR_ALJAMRi: Nahitsin'ny Ejipsiana ny dia ary nofaranany ny fisoavaliana ny Lohataona Arabo. Ho ela velona i Ejipta!
Manana fijery hafa kosa ilay Maraokana Ahmed:
@blafrancia: An-dalam-piovana ho toa an'i Pakistan i Ejipta. Fifidianana sy fanonganam-panjakana. Fifidianana sy fanonganam-panjakana. Fifidianana sy fanonganam-panjakana. Ny vokany dia tsy fitokisana amin'ny endriny manontolo ny demokrasia sy ny fironana ho amin'ny fivavahana sy politika mahery setra.